Lezienụ iji merie na izu igbe dị na Chakwasa ihie na Spain | Gam akporosis
Ọ bụ ihe dị ka oge, ọ bụkwa na Mịnịsta na-eri nri, Alberto Garzón, ekwuputala nke ahụ ha na-aga itinye akwa mgbochi na loot igbe ma ọ bụ kpọọ dị ka igbe loot. Ndị a dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 90% nke egwuregwu freemium ma katọọ ndị egwuregwu ka imeghe ha ka ha wee nwee ọganiihu.
Ndi ozo nke uche na-akpata ihe riri ahu ma gha nkpuru nke mere na ndị na-eto eto nwere ike ịhụ ndị na-ere akwụkwọ na ụzọ mara mma; nakwa na ha anatala mmachibido mgbasa ozi.
1 Dezie igbe izu na Spain
2 Na ebumnobi setịpụrụ na ụgwọ iji merie
3 Nile n'ime galik
Dezie igbe izu na Spain
Ebumnuche bụ ịhazi igbe ndị a na-apụnara mmadụ, ha na-abụkarịkwa nwere ihe ndi egwuregwu na-ekele nke ukwuu ma na ntinye ederede dị ala iji gbaa ume imeghe igbe ndị ọzọ, nke ahụ na-ewetakwa usoro ha nso ịkụ nzọ na pasent dị ala dị otú ahụ.
Ka Alberto Garzón n'onwe ya na-anakọta, ndị Igbe mkpọpụ bụ usoro ajọ omume nke na-agba chaa chaa na-agba ọsọ ọsọ ma nwee ike ịkpalite omume ịgba chaa chaa, ọkachasị ụmụaka.
Na-emetụ aka nke chioma mmadu nwere ike inwe na nke ahụ gbanyesiri mkpọrọgwụ ike n’inwe amara. Yabụ mgbe ọzọ, anyị nwere ike ịnwale igbe mkpọmkpọ iji hụ ma anyị ga-enweta uwe ọhụrụ ahụ maka agwa anyị na Fortnite ma ọ bụ kaadị ọhụrụ iji melite nkeji ahụ na Clash Royale.
Anyị ekwupụtala na anyị ga-ahazi "igbe ndị a na - apụnara mmadụ" na egwuregwu vidio, sistemụ rụrụ arụ nke na - akwado ịgba chaa chaa n'echeghị echiche ma nwee ike kpalite omume dị ka ịgba chaa chaa, ọkachasị n'etiti ụmụaka. https://t.co/t3fb8rZlyb
- Alberto Garzón? (@onyedikachi_) February 28, 2020
Otu ihe soro mba ndị ọzọ dị ka Belgium na nke na-egbochi igbe mkpọmkpọ ji na mba ha. Anyi weghachite okwu nke onye Minista a: obu usoro gbagọrọ agbagọ. Na usoro nke na-agbanye mkpọrọgwụ ka ọ bụrụ akụkụ nke ọtụtụ egwuregwu; Egwuregwu ndị anyị na-aga na ibe a na nke anyị na-egwu dịka Fortnite na PUBG Mobile.
Na ebumnobi setịpụrụ na ụgwọ iji merie
Eziokwu ahụ ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ gọọmentị nke mba ji okwu ndị a ekwu okwu na otu ha choro itinye ebumnobi na ugwo iji merie; egwuregwu ndị ahụ ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ ị ga-enwe ọtụtụ uru karịa ndị egwuregwu ahụ na-etinye oge ha kwa ụbọchị iji gbalịa inwe ọfụma.
Ee ọ bụ eziokwu na enwere ihe di iche na ufodu freemium. Anyị nwere ike ịghọta freemium ebe a na-enweta ihe ịchọ mma na igbe ndị ahụ apụtaghị na ọ nweghị ihe ọzọ kpatara ịbụ karịa ịhazi avatar anyị. Mana nke kachasị njọ bụ ndị na-enye gị ohere ịnweta ikike pụrụ iche ma ọ bụ ihe ndị na-adịghị ahụkebe nke na-agaghị ekwe omume ị nweta.
La ụlọ ọrụ na-egwu egwuregwu vidio debanyere ntụgharị nke ihe karịrị nde euro 1.53. Ha bụ ndị egwuregwu akwụ ụgwọ iji merie mmachi siri ike na usoro ọhụrụ nke Oriri ga-arụ ọrụ wee si otú a mee ihe iji kwụsị usoro a nke omume rụrụ arụ na usoro egwuregwu.
Nile n'ime galik
Onweghi onye gbapuru ebeaMa ọ bụrụ na ọbụna Nintendo dọrọ aka ná ntị na ọ na-amanye ụlọ ọrụ ndị dị na mpụga nke na-etolite egwuregwu mkpanaka ya iji lekwasị anya na egwuregwu karịa na usoro ndị ahụ rụrụ arụ, ọ nweghị ike ịgbanahụ. Ee n'ezie, ewepụla igbe ndị akwụna na mba Belgium.
Anyị nwere ike ikwu banyere ọtụtụ egwuregwu na ọtụtụ nde ihe nbudata na ụdị usoro a; ọ bụ ezie na ha na-adị mgbe niile ụgwọ ndị anyị bụ ndị Fans ma ọ bụ ndị nweere onwe ha dị ka ọhụrụ nke Ike & Ime Anwansi nakwa na ọ bụ nnọọ Chess Royale.
Ugbu a anyị ga-echere iji hụ nha na onye ga-akawanye njọ. Anyị amaworị na PUBG Mobile na-arụkwa ntakịrị unyi ma ọnụọgụ nke imetụ ihe aka adịchaghị nzuzu. Anyị ahụla ndị egwuregwu na-etinye $ 1.000 ha iji nweta ụfọdụ ihe ...
una ozi oma na ochichi a nwere ike ime ihe imegide igbe ndị a na-apụnara mmadụ na ndị na-akwụ ụgwọ iji merie. Nke ahụ na-egosipụtakwa nso ha dị nso na ihe na-eme ụbọchị ugbu a na ha abụghị carcas. Ugbu a ichere maka nha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Gọọmentị ndị Spain ga-etinye nnukwu ihe mgbochi na igbe mkpọsa nke egwuregwu ahụ
Ọ bụrụ na ị masịghị ya, egbula ya ...
Zaghachi Isaac Silva
Realme 6 kwadoro na Mediatek's Helio G90 na ndepụta Geekbench